FAQ - Mind Alive - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
मैले डेभिड प्रयोग गर्दा के हुन्छ?
त्यहाँ थुप्रै चीजहरू छन् जुन तपाईं डेभिड प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
1) तपाईंको EEG गतिविधि परिवर्तन भइरहेको छ - जसरी AVE आवृत्ति परिवर्तन हुन्छ, त्यस्तै दिमागमा आवृत्ति पनि हुन्छ - यो सजिलो छ! उदाहरण को लागी, हाम्रो महसुस बेहतर सत्र ब्रेनवेवहरु को पुन: स्थिर बायाँ फ्रन्टल अल्फा दबाएर जबकि दायाँ ललाट अल्फा सामान्य स्तर मा बूस्टिंग।
2) तपाईं अलग भइरहेको छ - AVE प्रयोग गर्दा, तपाईं वर्तमान क्षण मा आकर्षित हुन्छन् र आफ्नो दैनिक झगडा, व्यस्त तालिका, बिल तिर्ने, चिन्ता, धम्की वा चिन्ता सम्बन्धी विचारहरू छोड्नुहोस् र अस्वस्थ मानसिक "बकबक" लाई रोक्नुहोस्। पृथकीकरण विचार र शरीर जागरूकता देखि एक "बिच्छेदन" शामिल छ, गहिरो ध्यान को समयमा अनुभव छ। विच्छेदन ठीकसँग लागू गरिएको AVE बाट चारदेखि आठ मिनेटमा सुरु हुन्छ।
3) तपाईंको लिम्बिक प्रणाली स्थिर भइरहेको छ - तपाईंको शरीर शान्त छ, तपाईंको सास फेर्ने छ, तपाईंको हात न्यानो र मांसपेशी आराम।
4) न्युरोट्रान्समिटरको एक संख्या उत्पादन भइरहेको छ - मानिससँग निराश मुडसँग सेरोटोनिन र नोरेपाइनफ्रिनको स्तर कम हुन्छ। AVE ले समग्र कल्याण सुधार गर्न सेरोटोनिन, र norepinephrine को मस्तिष्क स्तर बढावा दिन्छ।
5) तपाईंको मस्तिष्क रक्त प्रवाह बढाइरहेको छ - CBF मानसिक विकार को धेरै रूप संग सम्बन्धित छ, चिन्ता, उदासीन, ध्यान समस्याहरु, व्यवहार विकारहरु र अशक्त संज्ञानात्मक समारोह सहित। CBF कम गर्न को लागी जब हामी उमेर अक्सर संज्ञानात्मक गिरावट निम्त्याउँछ। व्यक्ति अनुभव गर्दैछन् निराश मुडसँग सामान्यतया बायाँ फ्रन्टल र प्रिफ्रन्टल लोबेसमा सीबीएफको तल्लो स्तर हुन्छ।
श्रव्य दृश्य दृश्य के हो (AVE)?
एभीईले आँखामा लाइटहरू फ्ल्याश गर्न र हेडफोनलाई कानमा टसहरू स्पिन गर्न १ देखि २ H हर्ट्जसम्म विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरूमा ब्रेनवेभ गतिविधिलाई प्रभाव पार्न आईसेट्स प्रयोग गर्दछ। मस्तिष्कको गति बढ्दो छ वा ढिलो उत्तेजकहरू पछ्याउन।
कसरी धेरै सत्रहरू म एक दिनमा प्रयोग गर्न सक्छु? पछाडि म दुईवटा सत्रहरू प्रयोग गर्न सक्दछु? म कसरी डेभिड प्रयोग गर्न सक्छु?
यो तपाईं DAVID को लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र कुन परिणामहरू तपाईं प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया व्यक्तिहरू हरेक दिन वा हरेक दिन DAVID प्रयोग गर्दछ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तर अधिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै छन् जो बिहान एक एसएमआर सत्र र दिउँसो वा बेलुका आरामदायी शुमान सत्र प्रयोग गर्दैछन्। तपाईं साँझको लागि रिटायर हुनुभन्दा पहिले सेसन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा मध्य रातमा सत्र चलाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं उठिसक्नुभएको छ तर निदाउनमा कठिनाइ भइरहेको छ भने।
औसतले ​​कसरी प्रयोग गर्छ कुनै पनि परिवर्तनहरू हेर्नको लागि कति लामो समयसम्म लाग्छ?
यो धेरै नै निर्भर गर्दछ तपाईं AVE को प्रयोग गरिरहनु भएको छ र तपाई यसको लागि के प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ... विभिन्न उद्देश्यका लागि AVE प्रयोग गर्ने फरक-फरक व्यक्तिले विविध परिणामहरू देख्दछन्। केहि व्यक्तिले एक प्रयोग पछि परिणामहरू याद गर्छन्! तर सामान्यतया मानिसहरू प्रति हप्ता पाँच पटक AVE प्रयोग गर्नेले दुई देखि चार हप्तामा महत्त्वपूर्ण परिणामहरू देख्दछन्।
मस्तिष्कका तरंगहरू के हुन्?
हाम्रो दिमागले "व्यापक" बिजुली शुल्कहरू उत्पादन गर्दछ। यी शुल्कहरूले एक ताल सिर्जना गर्छ मस्तिष्क तरंग बान्कीका रूपमा चिनिन्छ। यी ढाँचाहरू इलेक्ट्रोएन्सेफ्लग्राफ (EEG) उपकरणहरू मार्फत अवलोकन योग्य छन्। EEGs एकजुटमा ठूलो संख्यामा न्यूरन्स फायरिंग रेकर्ड गर्दछ र नाप्छ। ब्रेन वेभ बान्की सामान्यतया चार बिभिन्न कोटीहरूमा समूहीकृत हुन्छ: बीटा, अल्फा, थेटा र डेल्टा। यी मस्तिष्क तरंग ढाँचा प्रत्येक दिमाग को विभिन्न राज्य संग सम्बन्धित छ।
बीटा तरंगहरू द्रुत, कम आयाम तरंगहरू १ to देखि times० पटक प्रति सेकेन्ड (हर्ट्ज) हुन्। बिटा मस्तिष्क तरंग बानीहरू स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ जब जागरूक, सचेत अवस्थाको अवस्थामा। बीटा तरंगहरू उत्पादन हुन्छन् जब तपाईं केहि पनि कार्य गर्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।
अल्फा तरंगहरू and र १ H हर्ट्जको बीचमा दोहोरिन्छन्। अल्फा तरंगहरू सनसनीपूर्ण विश्रामको समयमा हुन्छन् (उदाहरणका लागि जब आँखा बन्द हुन्छ), बौद्धिक विश्राम, गहिरो आराम, ध्यान वा दिमाग शान्त। अल्फा तरंगहरू मेडिटिटरहरूको इच्छित परिणामहरू हुन्। परम्परागत ध्यानका विधिहरूमा राम्रो अल्फा तरंगहरू उत्पादन गर्न १० बर्ष अभ्यास आवश्यक पर्दछ।
अल्फा मस्तिष्क तरंग ताल उत्पादन:
(१) शान्त भावनाहरू
(२) न्यानो हात र खुट्टा
()) भलाईको भावना
()) सुधारिएको निद्रा
()) सुधारिएको शैक्षिक प्रदर्शन
()) कार्यस्थलमा उत्पादकता बढ्यो
()) चिन्ता कम भयो
()) सुधार प्रतिरक्षा कार्य
यो विश्वास गरिन्छ कि आईन्स्टाइन जस्ता धेरै रचनात्मक प्रतिभाहरु अर्ध-स्थायी अल्फा राज्यमा थिए। धेरै जसो अन्तरदृष्टि मानिसहरू स्कूल मा कम ग्रेड थियो र तिनीहरू ढिलो सिक्ने व्यक्तिको रूपमा लिइन्थ्यो। हुनसक्छ तिनीहरू कक्षामा ध्यान दिन धेरै व्यस्त थिए।
अल्फा / थेटा बोर्डर
यी सत्रहरू शुमान अनुनाद र राज्य पाँच ध्यान हो। अल्फा / थेटा सीमा (to देखि H हर्ट्ज) मा, असाधारण अन्तरदृष्टि र व्यक्तिगत रूपान्तरण अनुभवहरू हुन्छन्। रिस, आक्रोश वा गाडिन्छ, बाल्यावस्थाका सम्झनाहरू धेरै छिटोले विघटन गर्दछन्।
थेटा तरंगहरू and र H हर्ट्जको बीचमा छन्। यसलाई सामान्यतया सपना वा "गोधूलि" राज्य भनेर चिनिन्छ। Theta सम्मोहन राज्यहरु, REM र सपना संग सम्बन्धित छ। मेमोरी विकास यस राज्य मा बृद्धि छ। थिटा मस्तिष्क तरंग राज्यमा, मेमोरी सुधार गरिएको छ (विशेष गरी दीर्घकालीन स्मृति), र बेहोश सामग्रीको पहुँच, reveries, स्वतन्त्र संघ, अचानक अन्तर्दृष्टि र रचनात्मक विचार वृद्धि भएको छ। यो एक रहस्यमय, मायाको दिमागको स्थिति हो। लामो समय सम्म अनुसन्धानकर्ताहरूले यस मस्तिष्क राज्यको अध्ययन गर्न सक्दैनन् किनभने विषयहरू निद्रा नलगाईकन कुनै पनि अवधिको लागि यस राज्यलाई कायम राख्न कठिनाई भएको थियो (जसले ठूलो मात्रामा टेटा उत्पन्न गर्दछ)।
यो ताल सुतिरहेको अवस्थामा अवलोकन गरिन्छ। हामी निदाउँदा प्रमुख प्राकृतिक मस्तिष्क लहर डेल्टा हुन्छ। डेल्टा तरंगहरू १ देखि H हर्ट्जमा फ्रिक्वेन्सीमा फैलिएको मस्तिष्क छालहरू सब भन्दा ढिलो हुन्। त्यहाँ बढ्दो प्रमाण छ कि व्यक्तिहरू डेल्टामा हुँदा अलि सचेत अवस्था कायम गर्न सक्छन्।
सबै मस्तिष्क तरंग राज्यहरूले महत्त्वपूर्ण मानसिक कार्यहरू गर्दछन्। यद्यपि अनुसन्धानले देखाएको छ कि प्राकृतिक, स्वस्थ अल्फा ताल १० हर्ट्जको नजिक छ। आजको जीवनशैलीमा, शान्तिमय, दिमाग / शरीरको मार्गमा फर्कने समयको कुनै पनि अवधिको लागि प्राप्त गर्न र राख्न गाह्रो भएको छ। यो कठिनाइले शरीर, दिमागमा रोग, बिमारी र गडबडी निम्त्याउँछ। यही कारणले हामीलाई अल्फाको उच्च स्तरमा फिर्ता जानको लागि हाम्रो दिमागलाई पुनः सुचारु गर्न वा पुन: प्रशिक्षण दिनको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। ढिलो अल्फा, अल्फा / theta सीमा र theta धीमा दिमाग छाल मानसिक विकार स indicate्केत गर्न सक्छ। बन्द गरिएको टाउकोमा चोट, फाइब्रोमाइल्जिया, र संज्ञानात्मक कमजोरी सबैमा यी ढिलो दिमागका तरंगहरूको अधिक मात्रा हुन्छ।
मैले चुनेको एक्स्टेन्सिटी सेटिंग के हो?
जब तपाइँ तपाइँको सेसन शुरू गर्नुहुन्छ, आँखाहरुको गहनता (ब्राइटनेस) लाई आरामदायक तहमा समायोजित गर्नुहोस्। एउटा उज्यालो गहनता स्तरले अधिक स्पष्ट रंग र "तीखो" ढाँचाहरू सिर्जना गर्दछ। होशियार रहनुहोस्, तथापि, अतिव्यापित छैन। बच्चाहरू र टाउको दुखाइको सिकार हुने व्यक्तिहरू तीव्रता कम राख्न सावधान हुनुपर्छ। फेरि, तपाईको अनुभव जति सहज छ, तपाईको नतीजाहरू पनि उत्तम छ।
मैले बिटा सत्रहरू कहिले प्रयोग गर्ने?
बीटा फ्रिक्वेन्सीमा उत्तेजना न्यूरो-उत्तेजकको रूपमा कार्य गर्दछ। बिहान बिटा उत्तेजना दिन सुरू गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो र कफीको लागि उत्कृष्ट विकल्प बनाउँदछ! सामान्यतया, पर्याप्त निन्द्रा र क्याफिन बिना, बिहान उठ्नु हावा हो। नयाँ परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्दा चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरूले डेभिडको प्रयोग गरेर पहिलो पटक बिटा सत्रहरू प्रयोग गर्न सहयोगी हुन सक्छ। ध्यान डेफिसिट डिसअर्डर (एडीडी) को साथ बच्चाहरूले बीटा सत्रहरू सहयोगी र शान्त पाउनेछ। बीटा सत्रहरू सामान्यतया संज्ञानात्मक कार्यको उपयोग गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ, ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दतको लागि र धीमा मस्तिष्क विकारहरूको उपचारमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ निरन्तर अल्फा वा थेटा गतिविधि सामान्य भन्दा बढी छ। बीटा फ्रिक्वेन्सीहरू भित्री, गैर-विशिष्ट चिन्ताको उपचारको लागि पनि सहयोगी भएको छ।
मैले अल्फा सत्रहरू कहिले प्रयोग गर्नुपर्दछ?
जब तपाईं गहिरो आराम वा अभ्यास अभ्यास गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं कुनै पनि अल्फा सत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अल्फा सत्रहरू विशेष गरी सहयोगी हुन्छन् जहाँ बाहिरी चिन्ता र उच्च उत्तेजना हुन्छ (चुप लागेर बस्न सक्दैन) वा यदि तपाईंसँग पोस्ट-ट्रामाटिक तनाव डिसऑर्डर (PTSD) छ। पहिलो पटक अल्फा सत्र प्रयोग गर्दा, १ to देखि minutes० मिनेटको छोटो सत्रबाट सुरू गर्नुहोस्। तपाईको सेसन भन्दा चार घण्टा पहिले क्याफिन खानु हुँदैन। एक हप्ता वा अधिक पछि सत्रहरूको लम्बाइ विस्तार गर्नुहोस्।
मैले थाटा सत्रहरू कहिले प्रयोग गर्ने?
थेटा सत्रहरू केही हप्ता पछि सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छन्, जब ध्यान र गहिरो विश्राम अल्फा सत्रहरूमा हासिल गरिन्छ। थेटा सत्रहरू नयाँ भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू सिक्नको लागि परिस्थितिहरूको लागि विकासात्मक र उत्तेजक सिर्जनात्मकताको लागि प्रभावकारी हुन्छ।
मैले डेल्टा सत्रहरू कहिले प्रयोग गर्नुपर्दछ?
अन्य सत्रहरू जस्तो नभई, जहाँ यो वांछनीय हो र जागा रहनु सबै भन्दा फाइदाजनक हुन्छ, डेल्टा सेसनहरूको लागि निन्दित चाहेको परिणाम हो। डेल्टा सत्रहरू "कुराकानी" लाई बन्द गर्न मद्दत गर्दछ जुन कहिलेकाँही व्यस्त दिन पछि देखा पर्दछ। यी सत्रहरू दुखाइ अनुभव गरिरहेका व्यक्तिहरूका लागि पनि उपयोगी छ। व्यक्ति जो "मानसिक कुहिरो" मा रहेको अनुभव गर्छन् सुत्नु अघि डेल्टा सत्रहरू प्रयोग गरी दिन को लागी बिटा सत्र प्रयोग गर्न सक्दछन्। साधारणतया डेल्टा सेसन चलाउनुहोस् जब तपाईं निदाउन मद्दत गर्नुहुन्छ, वा थप पुनःप्राप्त निद्राको अनुभव गर्न। सत्र स्वतः समाप्त हुन्छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरू अनजाने रातको समयमा केहि समय आईसेट र हेडफोन हटाउनेछन्।
ड्युअल प्रायः केहि सत्रहरूको बारेमा के हुन्छ?
एसएमआर / बीटा सत्र फ्रिक्वेन्सीहरूमा छन् जुन न्युरोफिडब्याकमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यी सत्रहरूले ध्यान मद्दत गर्न बायाँ मस्तिष्कको कार्य बढाउँदै र मस्तिष्कलाई आराम गरी hyperactivity र विकृति कम गर्न सिकाई सहयोग गर्दछ।
अल्फा / थेटा मिक्स सत्रहरूले गहिरो, स्फूर्तिदायी विश्रामको उत्पादन गर्दछ। ती सम्झनाहरू सम्झनामा पनि प्रभावकारी हुन्छन्।
डेल्टा / थेटा सत्र गहिरो विश्रामको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
डेभिडले सिक्न सक्छ?
थाटामा हुँदा प्रयोगकर्तालाई जानकारी प्रस्तुत गर्दा सिक्नको गति बढ्न सक्छ, यद्यपि यो प्रयोगकर्ता निदाउनबाट जोगिन आवश्यक छ। यदि यो हासिल गरियो भने, प्रयोगकर्ताले दिमाग को तरंगमा प्रवेश गर्नेछ जुन निष्क्रिय-जागरूकता भनेर चिनिन्छ। यो ढाँचा एक सत्र पछि तुरून्त देखा पर्छ र केहि घण्टा को लागी रहन्छ। यस समयमा, प्रयोगकर्ता धेरै आराम वा निष्क्रिय रहनेछ र अझैसम्म सतर्क रहनेछ। यो "किताबहरू हिट" गर्नका लागि राम्रो समय हो।
म कसरी DISVID लाई VISUISIISATION को लागी प्रयोग गर्न सक्छु?
शताब्दियौंदेखि, मानिसहरूले आफ्नो जीवनको गुणस्तर बढाउन भिजुअलाइजेशन र इमेजरी प्रयोग गरेका छन्। इमेजरी केवल दृश्यसँग सम्बन्धित छैन, तर गन्ध, स्वाद, ध्वनी र स्पर्शमा। स्पष्ट एक व्यक्तिको कल्पनामा यी इन्द्रियहरू सिर्जना गर्न सक्षम छ, इच्छित परिणामहरू हुने सम्भावना नाटकीय रूपमा बढेको छ।
दृश्य अनावश्यक आचरण वा प्रतिक्रियाहरू बदल्नको लागि एक शक्तिशाली उपकरण हो। उदाहरण को लागी, तपाईसँग चिन्ता, डर, क्रोध, खान, धुम्रपान वा अन्य ब्यबहारहरु को एक जोड को प्रतिक्रिया जब तनाव मा हुन सक्छ। तपाईं यी ब्यवहारहरूलाई शान्तता, स्वीकृति, त्याग वा अन्य वांछित व्यवहारको साथ बदल्न चाहानुहुन्छ। निम्न प्रक्रियाहरू प्रयोग गरेर यी नयाँ प्रतिक्रियाहरू कल्पना गर्नुहोस्:
एक theta सत्र चयन गर्नुहोस्।
सत्रको बखत अधिक सचेत नियन्त्रणको लागि आईससेटको तीव्रतालाई सुस्त पार्नुहोस्।
अवांछनीय प्रतिक्रिया देखा पर्दछ त्यस्तो स्थितिमा आफैलाई स्पष्ट रूपमा कल्पना गर्नुहोस्। अवस्था कल्पना गर्नुहोस् जहाँसम्म प्राय प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ। आफ्नो सामान्य प्रतिक्रिया कल्पना नगर्नुहोस्।
अर्को नयाँ प्रतिक्रियाको साथ आफैलाई कल्पना गर्नुहोस्। दृश्यको बाँकी दृश्य कल्पना गर्नुहोस् जस्तो यो अहिले भइरहेको छ, अहिल्यै। नयाँ भावनाहरू, स्पर्शको संवेदना, दृश्य, संवाद र गन्धसमेत समावेश गर्नुहोस्। तपाईको सास फेर्न र मांसपेशी टोनको बारेमा सावधान हुनुहोस्। प्रियजनहरूलाई सम्बन्धीत परिस्थितिहरूमा, ती व्यक्तिहरूको घनिष्ठता, समझ र हेरचाहको भावना महसुस गर्न सक्दो प्रयास गर्नुहोस्।
एक सत्रको समयमा धेरै पटक यस प्रक्रियाको कल्पना गर्नुहोस्।
तपाईं एक सतहको बखत कहिलेकाँही जागरूकताबाट टाढा हुन सक्नुहुन्छ। जति सक्दो चाँडो जागरूकता प्राप्त हुन्छ, फेरि कल्पना गर्न सुरू गर्नुहोस्।
जे होस् DAVID ज्वलंत चित्र उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई आफ्नो निर्देशित इमेजरीमा सचेत नियन्त्रण राख्न गाह्रो हुन सक्छ। यो तब हुन सक्दछ जब आईसेटमा बत्तीहरू धेरै उज्यालो हुन्छन् र / वा टोनहरू धेरै चर्को हुन्छन्, र प्रवेश अत्यन्तै प्रमुख हुन्छ र सबै बीटा गतिविधि दबाइन्छ। दिशानिर्देशित इमेजरीको सचेत नियन्त्रण कायम राख्न ब्रेनवेभ गतिविधिको बीटा कम्पोनेन्ट आवश्यक छ। उन्नत इमेजरी र तपाईंको भिजुअलाइजेशनको सचेत नियन्त्रणको अधिकतम मिश्रण प्राप्त गर्न र यसलाई कायम राख्न, यो कम तीव्रता सेटिंग चयन गर्न र / वा टोनहरूको भोल्यूम घटाउन सहयोगी हुन सक्छ।
डेभिडको प्रयोग गर्दा म अल्कोहल, क्याफिन वा अन्य ड्रगहरू प्रयोग गर्न सक्छु?
DAVID प्रयोग गर्दा, जतिसक्दो चाँडो क्याफिन बन्द गर्नु फाइदाजनक छ। क्याफिनले सामान्य उडान वा लडाई प्रतिक्रिया उत्पादन गर्दछ, शरीरलाई तल लगाउँछ, कारणहरू अनिद्रा र एक अधिक प्रतिक्रियाशील बनाउँछ - समस्या को कारण। हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं कुनै पनि रक्सी वा दिमाग परिवर्तन गर्ने ड्रग्स प्रयोग नगर्नुहोस् जब DAVID प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं कुनै निर्धारित औषधिमा हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई कुनै पनि खुराक परिवर्तन गर्नु अघि आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिन सल्लाह दिन्छौं।
के म मेरो आँखा खुला राख्न वा बन्द राख्नु पर्छ? के मैले जागिर खानु पर्छ वा सत्रको बेलामा फोन गर्नुहोस्?
धेरै व्यक्तिहरू DAVID प्रयोग गर्न रुचाउँछन् तिनीहरूका आँखा बन्द छन्, जबकि कि त राम्रो छ। यसले प्रयोगकर्तालाई बढी आराम र विश्राम गर्न अनुमति दिँदछ। साथै, तपाईंको आँखा बन्द बन्द पलक एक हेराइ पर्दाको रूपमा सेवा। यदि तपाईं दृश्यका लागि वा सिक्नको लागि सत्र प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, जागा रहन सल्लाह दिइन्छ ताकि तपाईं सजगतापूर्वक आफ्नो कल्पना छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। DAVID सामान्य आरामका लागि प्रयोग गर्ने क्रममा, तथापि, धेरै व्यक्ति निदाउनमा रमाउँछन्।
यदि म निर्धक्क रहन चाहन्छु भने म कसरी जागा रहन सक्छु?
अक्सर, सत्रहरू प्रयोग गर्दा जब अल्फा र / वा थाटा फ्रिक्वेन्सी (to देखि H हर्ट्ज) प्रयोग गर्दछ, प्रयोगकर्ता सजिलै निदाउनेछ। यदि तपाइँ यसलाई रोक्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँको सत्रको साथमा आरामदायक संगीतको सीडी (वा अडियो क्यासेट टेप) जोड्नुहोस्, वा ओछ्यानमा पल्टिनुभयो भने, तपाइँको कुलोलाई ओछ्यानमा आराम गर्न अनुमति दिँदै हात समाउनुहोस्। जब तपाईं निन्द्रामा जानुहुन्छ, तपाईंको साना पतन हुनेछ। यो कार्यले तपाईंलाई यो महसुस गर्न अनुमति दिनेछ कि तपाईं निदाइरहेका छन्। कोठामा केहि छ जसले कहिलेकाँही आवाज उत्पन्न गर्दछ यसले तपाईंलाई जागरूकता क्षेत्रमा राख्न मद्दत गर्दछ।
डेविड प्रयोग गर्दा म कुन सीडी प्रयोग गर्न सक्छु?
तपाइँ कुनै सत्र, "आत्म-सुधार" वा रचनात्मकता सीडीहरू तपाइँको सत्रहरू बढाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले कुनै पनि संगीत प्ले गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ रमाईलो गर्नुहुन्छ (दिमागमा राख्दै कि तपाइँ सायद शान्त, रमाईलो सत्रहरूको लागि ढिलो संगीत चाहानुहुन्छ)। यो सत्र हेर्नुहोस् कि तपाइँको सत्रको साथ कसरी संगीत सिंक गर्ने वर्णन गर्दछ।
द्विपक्षीय पिटहरू के हो?
बिनौराल बिटहरू हुन्छन् जब हेडफोनको प्रत्येक पक्षको माध्यमबाट दुई लगातार टन विभिन्न पिचहरू छुट्टाछुट्टै प्ले गरिन्छ। बिनौरल बिट्सको बारेमा थप जानकारीको लागि, डेव सिभरको लेखलाई हेर्नुहोस्।
डिसोसिएसन भनेको के हो?
पृथक्करण एक प्रक्रिया हो जसमा भावनाहरू, सम्झनाहरू, विचारहरू र शारीरिक संवेदनाहरू चेतनाबाट बग्दछन्। अलग जब हामी ध्यान, व्यायाम, एक राम्रो पुस्तक पढ्ने, एक राजमार्ग मा ड्राइभ, एक फिल्म हेर्न वा एक खेल घटनाको मजा आउन सक्छ।
ईन्ट्राइंमेन्ट भनेको के हो?
एन्ट्रेमेन्ट एक प्रक्रिया हो जहाँ मस्तिष्क सिnch्क्रोनाइज हुन्छ र बाह्य उत्तेजनाका साथ प्रतिध्वनि गर्दछ।
के हो HRV (हृदय दर भिन्नता)?
HRV एक रिलक्सन टेक्निक मुख्यतया तनावपूर्ण व्यक्तिहरूको साथ प्रयोग गरिन्छ जुन प्राय: उथलपट्टि, छिटो सास फेर्दा अनुभव गर्दा निराश, डराउँछ र / वा चिन्तित महसुस गर्दछ। हेडफोनको माध्यमबाट खेलाइएको मुटुको धड्कन सुनेर, मानिसहरूले पेटको (छाती होइन) गहिराइलाई दुई मुटुको धड्कनका लागि श्वास नियन्त्रण गर्न सक्दछन् र दुई बीटको लागि सास फेर्न सक्छन्। सास चक्र सत्रको सुरूमा करीव आठ सेकेन्ड लिन र सत्रको प्रगति हुने बित्तिकै दस सेकेन्ड सम्म पूर्वसेट गरिएको छ।
श्यूमन अनुभवी के हो?
शुमान रेजोनान्स (7.83 हर्ट्जको दर) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसनले पृथ्वीको चारैतिर घुम्ने समय प्रति सेकेन्ड हो। यो गणना स्वतन्त्र हावा वा भ्याकुम मार्फत लगभग १186,273,२299,775,730। माईल (२ 23,789,, 38,285,533, 7.83० मिटर) प्रति सेकेन्डमा यात्रा प्रकाशको गतिमा आधारित छ। वैज्ञानिकहरूले एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापन गरेका छन् जुन २'s,XNUMX miles माईल (, XNUMX,२XNUMX,, XNUMX मीटर) को परिक्रमा प्रति सेकेन्ड XNUMX..XNUMX क्रान्तिको रूपमा प्रसार गर्दछ। यो देखिएको छ कि अलौकिक गतिविधिहरू अभ्यास गर्ने धेरै व्यक्तिहरूले शूमेन अनुनाद जस्तै समान आवृत्ति (दर) मा ब्रेनवेभ बान्की उत्पादन गर्दछन्।
सेन्सर मोटर मोटर (एसएमआर) के हो?
एसएमआर ब्रेनवेभ ताल हो जुन मस्तिष्कको संवेदी मोटर कोर्टेक्समा देखा पर्दछ। यसको फ्रिक्वेन्सी सामान्यतया १२ देखि १ H हर्ट्जको हुन्छ। यो वास्तवमै केवल एसएमआर हुन्छ जब यो फ्रिक्वेन्सी संवेदी मोटर स्ट्रिपमा पत्ता लगाइन्छ तथापि, धेरै चिकित्सकहरूले एसएमआर शब्द प्रयोग गर्छन् फ्रिक्वेन्सी दायरा वर्णन गर्न जहाँ यो मस्तिष्कमा देखा पर्दैन।
सफ्ट अफ के हो TM?
सफ्ट अफTM आईसेटमा बत्तीहरूको तीव्रता र टोनको भोल्युम एकैसाथ र बिस्तारै कम हुँदा यस्तो हुन्छ जसले सत्र समाप्त गर्न कोमल तरिका प्रदान गर्दछ। जब प्रकाश र ध्वनि उत्तेजना अचानक बन्द हुन्छ, प्रयोगकर्तालाई हल्का मतली र / वा चक्कर आउँछ, सोम्नाटिक शकको रूपमा चिनिन्छ।
पहिलो व्यक्तिहरू को हुन् भनेर पत्ता लगाउन कि ब्रेन तरवारिक फोटोग्राफी द्वारा ड्राइभ हुन सक्छ? तिनीहरूले यो कहिले पत्ता लगाए?
१ 1934 .XNUMX मा एड्रियन र म्याथ्यूज
जब क्वेरीमा पहिले प्रयोग गरिएको थियो?
सन् १ 1958 XNUMX देखि। त्यो मस्तिष्क ब्रेन वेभ सिnch्क्रोनाइजर हो, सिडनी स्नाइडरले सिर्जना गरेको हो, र मुख्यतः सम्मोहन प्रेरणको लागि र दन्त प्रक्रियाहरूमा बिरामीहरूमा हुने पीडा कम गर्न र शल्यक्रिया भइरहेको बिरामीहरूको लागि प्रयोग गरिएको थियो।
डेभिडका लागि के केहि प्रयोगहरू छन्?
DAVID को लागी धेरै प्रयोगहरू छन्। उदाहरण को लागी, यो ध्यान डेफिसिट डिसअर्डर को लागी धेरै प्रभावी छ। एभीई सफलतापूर्वक चिन्ता, मौसमी असरदार डिसआर्डर (SAD), पोस्ट ट्राउमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर (PTSD) र आघातका लक्षणहरूलाई कम गर्न प्रयोग गरिएको छ। यो कम Brainwave विकारहरू जस्तै Fibromyalgia, क्रोनिक थकान सिंड्रोम (सीएफएस) र पूर्व मासिक धर्म सिंड्रोम (PMS) को साथ मद्दतको लागि धेरै उपयोगी फेला पर्‍यो। DAVID निद्राको सुरूवातको साथ सहयोग गर्न र निद्राको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। वरिष्ठ नागरिकहरूले एक DAVID प्रयोग गर्दा अनुभूति र सन्तुलन मा सुधार देखाएको छ।
त्यहाँ कुनै पनि नकारात्मक पक्ष प्रभावहरु छन्?
राम्रोसँग डिजाइन गरिएको उपकरणको साथ, यसको साइड इफेक्ट विरलै पाइन्छ। जे होस्, गलत प्रयोगले चिन्ता बढाउन सक्छ वा व्यक्तिलाई "अस्पष्ट टाउको" बनाउँदछ। भाग्यवस, कहिलेकाँही अनुचित प्रयोगबाट नकारात्मक पक्ष प्रभाव कहिल्यै स्थायी हुँदैन र एक दिन भित्र टाढा जान्छ। सही डिजाइन गरिएको उपकरणको साथ सही सत्र प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
के डेभिडलाई मद्दत गर्नेछ JAW TENSION र TMJ TENSION And PAIN?
हो। मायो-फेसिअल, काँध र / वा टीएमजे दर्दको साथ अधिक व्यक्ति, एक सत्रमा १० मिनेट भित्र राहत महसुस गर्न शुरू हुनेछ।
के डेभिडले असर पारेको रगत बगिरहेको छ?
हो। पीईटी स्क्यान र एफएमआरआई स्क्यानहरूले पत्ता लगाए कि धेरैजसो दिमाग डिसफंक्शनमा मस्तिष्कको विभिन्न क्षेत्रमा कम सेरेब्रल रक्त प्रवाह र मेटाबोलिजमको एक तत्व समावेश छ। फक्स र रायचका अनुसार फोटिक उत्तेजनाले सेरेब्रल रगत प्रवाह २ 28% सम्म बढाउन सक्छ।
के डेभिडले टेन्से पनी व्यक्तिको पुन: जवाफ दिन मद्दत गर्दछ?
हो। अध्ययनहरूले संकेत गर्दछ कि अल्फा मस्तिष्क तरंग दायरा (- - १० हर्ट्ज) मा AVE ले प्राय: छ मिनेट भित्र गहिरो विश्राम उत्पन्न गर्दछ।
के AWE लाईड मिडीटेसन छ?
यो हुन सक्छ, प्रयोग गरिएको सत्रमा निर्भर गर्दै। अध्ययनले देखायो कि धेरै जसो समय, सामान्यतया १० मिनेट भित्र, AVE ले धेरै वर्षको अनुभवको साथ जेन मेडिटेटर्सको समान ब्री brain्वेभ बान्की सिर्जना गर्न सक्छ।
डेभिडले के सुधार गर्न सकीन्छ?
हो। DAVID प्रणालीहरू दुई फ्रन्टहरूमा काम गर्दछन्। पल शेलीले गरेको एक अध्ययनले देखाए कि minutes० मिनेटको सेतो उज्यालो AVE ले सेरोटोनिन २ 30% र नोरिपाइनफ्रिन १ 23% ले वृद्धि गर्दछ। साथै, उदासीनता सँधै EEG मा आफूलाई बायाँ र दायाँ ललाट क्षेत्रहरू बीच अल्फा असममितिको रूपमा देखाउँदछ, बाँया पक्षमा अधिक अल्फाको साथ। अल्फा एक "सुस्त" ताल हो, त्यसैले "खुशी" बायाँ तिर झुकाउँछ, जो पछि छोड्दछ निराश/ नियन्त्रणमा चिन्तित दाहिने पक्ष। मस्तिष्क प्रकार्य सामान्य गर्ने हाम्रो अल्फा / बीटा सत्रहरू प्रयोग गरेर यो असममिति कम गर्न सकिन्छ। अल्फा / बीटा सत्र पनि सामान्यतया चिन्ता कम गर्दछ।
सजीव उत्पादनहरूमा ग्यारेन्टी के हो?
हाम्रो सबै उत्पादनहरू एक वर्षको वारेन्टी द्वारा भागहरू र श्रम सबै दोषहरूमा कभर छन्।